Windows ကို 10 အလိုအလျှောက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထည့်သွင်း, အသုံးပြုသူများကတိုင်ကြား - သတင်း Rule
Windows ကို 10 အလိုအလျှောက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထည့်သွင်း, အသုံးပြုသူများကတိုင်ကြား
Microsoft က Reddit အပေါ်တောင်းဆိုမှုများငြင်းဆို, ဖိုရမ်များ, ဂိမ်းကစားဆိုဒ်များနှင့် Twitter ကို Windows က 10 Windows ပေါ်မှာအတင်းအဓမ္မနေပါသည်7အသုံးပြုသူများအတောင်းခြင်းမရှိဘဲ PC များ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Windows ကို 10 အလိုအလျှောက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထည့်သွင်း, အသုံးပြုသူများကတိုင်ကြား” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, အင်္ဂါနေ့ 15 ရက်မတ်လအပေါ် theguardian.com များအတွက် 2016 11.02 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Windows ကို7အသုံးပြုသူများအကြောင်းကို Windows သတင်းပို့ကြသည် 10 အလိုအလျှောက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် install လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
အသုံးပြုသူရမှတ် Twitter ပေါ်တွင် posted ပြီ, ဖိုရမ်များ, Windows ကိုအကြောင်းတိုင်ကြားမှ reddit နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုဒ်များ 10 အလိုအလျှောက် install လုပ်ပါ, ထင်ရသောတောင်းခြင်းမရှိဘဲ, မကြာခဏအရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာအလယ်၌.
Reddit အသုံးပြုသူ LHoT10820 သတိပေး posted, အရာကျော်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည် 2,800 မှတ်ချက်များ, အအတင်းအဓမ္မ Windows ကိုအကြောင်း 10 ဒါကြောင့်မိမိအဘ၏ကွန်ပျူတာ "bricked" ပြီးနောက်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်.
Geekygirlhere ကပြောပါတယ်: "ဟုတ်တယ်ဒီနံနက်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်. အလုပ်အဖွဲ့နှင့်ရုတ်တရက် Windows ကိုအားလုံးငါ့အလိုရှိသမျှအစီအစဉ်များကိုပိတ်ထား, ငါ့ကိုအထွက် logged နှင့်အဆင့်မြှင့်စတင်. ငါသည်အလျင်အမြန့်ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ပစ်နှင့်ကရပ်တန့်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်သော်လည်းငါ့သားဒါကြောင့်ကံကောင်းမဟုတ်ခဲ့. တူညီတဲ့အရာကယနေ့သူ့ကိုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ "
8165128200 ကပြောပါတယ်: "ကျနော်တို့ကဆရာဝန်၏ရုံးခန်းမှအားလုံးတစ်ပတ်အတွင်းစီးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရတဲ့ခဲ့ကြရတယ်, ပါးစပ်တွင်းအလေ့အကျင့်, B က&BS နှင့်မိုးမိုးကုမ္ပဏီတွေက - အခြားသူများအကြား - ဤဝင်တိုက်က fuck ဆိုတဲ့ရှုပ်ထွေးင်ခဲ့ကြကြောင်း.
"အချို့ကိစ္စများတွင်အဆင့်မြှင့် OK ကို သွား. အသုံးပြုသူပဲတကယ်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်. အခွားသူမြားကို, Windows ကို 10 အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတစ်ဦးရဲ့ login password ကိုတောင်းသည်နှင့်ကတည်းကအသုံးမခဲ့သည်, ကပျော်စရာခဲ့သည်. ဆဲအခြားခုနှစ်တွင်ကသူတို့က Shared ဖိုလ်ဒါမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတက်လွဲချော်သွားတာ "လို့ပြောပါတယ်။
ဂိမ်းဆိုက် Kotaku ဘို့တောင်မှအကြီးတန်းသတင်းထောက်ပက်ထရစ် Klepek ခဲ့သည် ထင်ရသော Windows ကိုမှတစ်ဦးအဆင့်မြှင့်သို့အတင်းအဓမ္မ 10.
'' အကြံပြု update ကို ''
Windows ကိုရယူပါ 10. ဓါတ်ပုံ: Microsoft က / PA ဆိုပြီး
Microsoft ကမကြာသေးမီကပြောင်းလဲသွား Windows ကို 10 "အကြံပြု" ဖို့ "optional ကို" ကနေအဆင့်မြှင့်တင်ရန်, တစျအဆငျ့ကို Windows Update ကိုအတွင်းအမြင့်ဆုံး "ဝေဖန်" သတ်မှတ်ရေးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့်အောင်, Windows ကိုသို့တည်ဆောက်ဆော့ဖ်ဝဲ update ကိုစနစျ. အဆိုပါပြောင်းလဲမှုလျှင်အသုံးပြုသူများကို Windows ရဲ့အပေါ်ကို Windows update ကိုရှိသည်သောဆိုလိုသည် 7, 8 သို့မဟုတ် 8.1 '' အားလုံးအကြံပြု updates များကို install '' ဟုသတ်မှတ်, အရာများစွာကိုပြုပါမည်, Windows အ 10 အဆင့်မြှင့်ကိုအလိုအလျောက်အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ကွန်ပျူတာကို download လုပ်ပါလိမ့်မယ်.
ဒါပေမယ့် Microsoft Windows နဲ့အလေးအနက်ဆိုသည် 10 အလိုအလျှောက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခွင့်ပြုချက်တောင်းစရာမလိုဘဲ install မည်မဟုတ်.
တစ်ဦးက Microsoft ကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်: "ကျနော်တို့အပေါ်နှောင်းပိုင်းတွင်အောက်တိုဘာလအတွက် shared Windows ကိုဘလော့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Windows အတွက်ကလွယ်ကူအောင်မှကျူးလွန်နေကြတယ်7နဲ့ Windows 8.1 ဖောက်သည်များက Windows မှအဆင့်မြှင့်တင်ရန် 10. ကပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, ကျွန်တော်ပိုပြီးလွယ်ကူဖောက်သည်သူတို့၏အဆင့်မြှင့်ရာအရပျကိုယူဘို့အချိန်အချိန်စာရင်းရန်အဘို့အဖြစ်စေခြင်းငှါအဆင့်မြှင့်အတှေ့အကွုံ updated ပြီ. Customer များကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အပြည့်အဝဖြစ်ဆက်လက်, နှင့် Windows ကို install လုပ်မရှေးခယျြနိုငျ 10 အ Windows Update ကို setting များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် Windows Update ကိုမှအအဆင့်မြှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ "
Microsoft ကလည်းအစီရင်ခံစာများက Windows ကဤသို့ဖော်ပြသည် 10 အသုံးပြုသူများသည်အပေါ်အတင်းအဓမ္မခံရ "တိကျမှန်ကန်မဟုတ်" ဖြစ်ကြောင်းနှင့် Windows ကိုမြင်လျှင်အသုံးပြုသူများကိုသူအကြံပြု 10 မမျှော်လင့်ဘဲ install လုပ်ပြီးအသစ် operating system ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ,.
တစ်ဦးက Microsoft ကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမေးကပြောပါတယ်&တစ်ဦးက: "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏အချို့သောများအတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတှေ့အကွုံ updated ပြီ, အဘယ်သူသည်ယခင်ကမိမိတို့အအဆင့်မြှင့် reserved ခဲ့, အရပျကိုယူမှ၎င်းတို့၏အဆင့်မြှင့်များအတွက်အချိန်အချိန်စာရင်းဖို့။ "
အသုံးပြုသူများလည်းရည်ရွယ်ဘဲကို 'ကိုလက်မခံ' သို့မဟုတ် '' အိုကေ 'ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်အပေါ်သို့မဟုတ်ပုတ်ကြပြီစေခြင်းငှါ, သောအသုံးပြုသူထိုကဲ့သို့သော Windows ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးနှင့် action ကိုတောင်းဆိုတဲ့ pop-ups နှင့်အတူအသုံးပြုသူများအ bombarding ကျယ်ပြန့်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ password တောင်းဆိုမှုများ၏ခေတ်သစ်လမ်းကြောင်းသစ်အဖြစ် interface ကိုဒြပ်စင်, လုပ်ဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်.
တစ်နည်းနည်းဖြင့်, ဒါကြောင့်သတိမထားမိအသုံးပြုသူများကဖမ်းသည်, သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကို၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများမှလုပ်ပါလိမ့်မည်သည့်သိသာသတိပေးခြင်းမရှိဘဲ, မကြာခဏအလုပ်အလယ်၌, သူတို့ရဲ့စိတ်ပျက်ဒေါသထွက်မှုများမှ Twitter ကိုမှဦးဆောင်အသုံးပြုသူများသည်.
OH WINDOWS တွေကြည့်လိုက် 10 တောငျးလြှောကျ ME မရှိဘဲနဲ့ MY PC ကွန်ပျူတာကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းစတင် AND ငါ GDC ၌ထွက်ခွာမည် 15 နာရီ pic.twitter.com/PS192VD37O
- စင်တီဂရိတ်ဂိမ်းစတူဒီယို (@celsiusgs) မတ်လ 11, 2016
@DanNerdCubed ဝမ်းနည်းစရာ, ဟုတ်တယ် – သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ရဖို့သွားလေ၏, သူမနောက်ကျောတယ်သောအခါ, Windows ကို 10 အဆင့်မြှင့်ခဲ့သည်…
- အများစုကတစ်ဦးကစစ်မှန်သောမလိုလား (@manytrienrd) မတ်လ 12, 2016
@microsofthelps ငါ့သမီးရဲ့ Laptop ကိုပြတင်းပေါက်အဆင့်မြှင့်စတင် 10 သူမ၏သဘောတူမပါဘဲ & တစ်ဦး dissertation မှတဆင့်တစ်ဝက်လမ်း. အဘယ်ကြောင့်?
- မှ Ian lowe (@ ianlowe1445) မတ်လ 14, 2016
ငါ့ Laptop ရုံပြတင်းပေါက်အဆင့်မြှင့်စတင် 10 ပင်ကိုဘယ်လိုရိုင်းစိုင်းငါ့ကိုတောင်းခြင်းမရှိဘဲ
- ယာကုပ်➴ (@IibraryofsouIs) မတ်လ 5, 2016
အချို့သောအဘို့, Windows ကို 10 လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေတဲ့အသက်ရှုခဲ့, ထို ယနေ့အထိ Windows ရဲ့အကောင်းဆုံးဗားရှင်း ဒီလိုအဖြစ် 2-In-1 စက်တွေများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ software ကိုကြောထောကျနောကျ Microsoft က Surface ကစာအုပ်. ဒါပေမဲ့ Microsoft ကသုံးစွဲသူတွေကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရဟာသူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်ရန်လိုခဲ့, အခမဲ့သစ် operating system ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နှင့်က Windows Update ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက်က Windows Store ကသို့မဟုတ်ဆင်တူနေတဲ့ကို manual ကို download အောင်.
Microsoft ရဲ့ရှုထောင့်ကနေအလွန်အရေးကြီးသည်အသုံးပြုသူများအားအဆင့်မြှင့်တင်များ၏အလေ့အထအတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ရဖြစ်ပါသည်, Apple ရဲ့ OS X ကိုအသုံးပြုသူများကဲ့သို့သော, အမွေထောက်ခံမှုပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန် ကုမ္ပဏီ၏ Windows XP ကိုအတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်. Microsoft က XP ကိုမှအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသူများအတွက်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်, ဆော့ဖ်ဝဲထောက်ခံမှုထဲကကျဆင်းသွားပင်ပြီးနောက်.
အများစုက Windows ကိုမြင်7လာမည့် Windows XP ကိုဖြစ်ခြင်းအဖြစ်, အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဆင့်မြှင့်၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကို unconvinced ရှိနေဆဲနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထောက်ခံမှုအပေါ်အဆုံးသတ်ကြောင်း software ကိုအပေါ်မှီဝဲအဖြစ်သာကျန်ရှိနေသေးကြောင်းဘယ်မှာ 13 ဇန္နဝါရီလ 2015 နှင့်၎င်း၏တိုးချဲ့ထောက်ခံမှုအပေါ်အဆုံးသတ် 14 ဇန္နဝါရီလ 2020, ကတူညီတဲ့လမ်းအတွက်အများကြီးလိုအပ်နေလုံခြုံရေးမွမ်းမံမှုများခံယူမည်မဟုတ်သည့်ပြီးနောက် XP ကိုမရှိတော့ပါဘူး.
Windows ကို 10 - ၎င်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်မြှင့်တင်နှင့်အတူ Windows ရဲ့နောက်ဆုံး version အဖြစ်တံဆိပ်ကပ် - အဖြေအဖြစ်ရှုမြင်သည်, ဒါပေမဲ့အသုံးပြုသူများသည်ပထမဦးဆုံးကအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ရှိသည်.
Windows ကိုကနေ 1 Windows ကိုမှ 10: 29 Windows ကိုအီဗိုလူးရှင်းအနှစ်
23548	6 အပိုဒ်, computing, Microsoft က, သတင်း, ရှမွေလသည် Gibbs, Software များ, နည်းပညာ, Windows ကို, Windows ကို 10
← HTC ကအဆိုပါ Vive အကြို VR နားကြပ် – Verge အားဖြင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [VIDEO] အဆိုပါအများစုဟာအသုံးဝင်သော, -ရှိရမည်တဲ့ Car တွင်အင်္ဂါရပ်များ [RANKER] →